Article submitted by: minkyaw thuyein on 19-May-2013
မနိုု်င်းသင်.တာ မနျိုင်းနဲ့ ဗျာ (၂)
အလျှင်းသင့်တုန်းတခါထဲ ပြောရရင် ရန်ကုန်မှာ အဌားကား တက္ကစီတွေဟာ. Road worthy ဖြစ်ရဲ.လား RW လက်မှတ်ဝယ်ထားတာလား ၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဈေးနဲ.ဘယ်တော့မ မလိုက်ဘူး . သူခေါ်တဲ့ ဈေး ကို ဆစ်ပြီး ၂ ဦးသဘောတူ တဲ့မှ လိုက်တယ် ၊ ၂ ဦးသဘောတူ ဆိုတာလက်မှတ်မထိုးထား
ဘူးဘာလုပ်လို.ရမှာလဲ ပုလိပ်ကိုတိုင်ရင် လဲ အလကားဘဲ ကိုယ့်ခရီးနှောင့်နှေး
ရုံဘဲ ရှိတယ် ။ ခရီးသယ် ခရီးသွားအာမခံ Travel Insurance အာမခံဆိုတာ
ဘယ်မှာလဲ စသဖြင့် ကျုပ်တတ်သမျှ မှတ်သမျှတွေ အသီတတန်း လျှောက်ပြော
နေလို.လဲ မပြီးသေးဘူး. ဘာမှ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်သေးဘူး ။ အခြေအနေကိုက ခွင့်မပြုသေးဘူး ကိုရင်ကြီးရဲ. ၊ ဒါကြောင့် ဥပဒေ ရှိတိုင်းလုပ်ရရင် ကျုပ်တို.တွေ အီးတောင် မပေါက်နိုင်ပါဘူးလို.ပြောထားတာ ၊ တရွေ.ရွေ.ပြောင်းလဲ ခြင်းနဲ. လုပ်ရမယ်၊ တဟုန်ထိုးပြောင်းလဲ ဘို. ခံနိုင်ရည် မရှိဘူး လို ဒဲ့ဒိုးဘဲ ပြောပါရစေ။
မြန်မာတွေဟာ ကမ္ဘာသားတွေ အနေ နဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာဖြစ်နေတာတွေကို သိဘိူု.လိုတယ်၊ အထူးသဖြင့် ကျုပ်တို.မြန်မာတွေဟာ ကျုပ် တို. သမိုင်းကို ကြေကြေ
လယ်လယ် သိကြဘို.လိုပါတယ်၊ မြန်မာဟာ ကမ္ဘာနဲ့ ဆက်နွယ်နေတာပါ ၊အိမ်နောက်ပူ အိမ်ရှေုမချမ်းသာ ဆိုတာ ရှိပါတယ် ။ အိမ်ရှေ.ကို အပူရှိန်ဟတ် တာတော အနဲဆုံးပေါ.ဗျာ။ အခုပြောနေရတာကို က အဲဒီအပူရှိန်ကို ခံစားမိလို.ဘဲ မဟူတ်လား ။ ဒါကတော့ ကိုရင်ကြီးသိတဲ့ အတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံကို အစိပ်စိပ် ကွဲလိုတဲ့စိတ်နဲ့ ကွဲအောင် တမင်လုပ်နေကြသူတွေ ၊ ကွဲမှလဲ မြန်မာပြည် ငြိမ်းချမ်းမယ် လို. ယုံကြည်သူတွေ ရှိကြတယ် ။
လူဆိုတာအမျိုးမျိူးလေ၊ ယုံကြည်ချက်ချင်း။ နည်းဗြူဟာချင်း မူဝါဒချင်း မတူ
လို. မညှိနိုင်လို. ပဋိပက္ခတွ ဖြစ်နေရတာဘဲ မဟုတ်လား၊ စောင်နေ ကြ တာဘဲ မဟုတ်လား ။ ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်နေရမှ စားဝင် အိပ်ပျော်တဲ့ ပုလိပ် ကတော်တွေ ကလဲ ရှိသေးတယ် ။
ဦးနေ၀င်းဟာ ဦးသန်းစိန် မဟုတ်ပါဘူး ၊ ၁၉၆၈ ခု စစ်တက္ကသိုလ်ဆင်း ဦးသိန်းစိန်ဟာ စစ်မှုထမ်းကါလ နှစ်၄၀ ကျော် စစ်မှုထမ်းပေမဲ့ ပါဏာတိပါတ ကံ မဖေါက်တဲ့ ရဲုးထိုင် စစ်သားသူတော်ကောင်း လို.ဆိုလို.ရမလား၊ တကျောင်းတဂါထာ တရွာတပုဒ်ဆန်း သူဗြူဟာနဲ သူချည်းဘဲပေါ့ ၊ မှတ်သား
စရာတွေ မှတ်သားပြီး ပြုပြင်စရာတွေ ပြုပြင် ။အခြေအနေပေးရင် လိုအပ်တာ
တွေ တိုးတက်အောင်လုပ်ကြရမယ် ဘဲ ဖြစ်တယ် ။
ကျုပ်လဲ သံသရာက လွတ်အုံးမဲ့ ပုံ မရှိဘူး ။ ဆက်ပြီး ကျင့်ရအုံးမယ် ။ ကိုရင်ကြီး
လောက် သမာသမ ဖြစ်ဘို.ကြိုးစားရအုံးမှာပေါ့ ဗျာ။ သမာသမ မရှိတဲ့လူ.လောကကြီးထဲမှာ သမာသမဖြစ်ဘို.ကြိုးစာတာခက်မယ် ၊ ဒါပေမဲ့ဟာ ကြိုးးစားကောင်း ပါတယ်။
နောက်ဆုံးပြောခြင်တာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံကို ပုလိပ်နဲ့ စစ်သားတွေ ဖျက်နေ
တာ ပြောခြင်ရင် ပြောပေါ့ ၊ ပုလိမ်တွေ စစ်သားတွေ ဟာကျုပ်တို.က မွေးလိုက်
တဲ့ သားသမီး မဟုတ်ဘူးလို.တော့ မပြောနဲ.နော် ။
ဒီအခေါက် သိပ်မပျော်ဘူး ကိုရင်ကြီးရေ.။